November 5, 2020 - Achawlaymyar
November 5, 2020 by Achawlaymyar
မိန်းမ က လင်ယောကျာ်းရဲ့ ညာဘက်မှာ အိပ်ရင် ယောကျာ်းက ဘုန်းကံနိမ့်ပြီး အိမ်ထောင်ရေး မှာ စီးပွားရေးလာဒ်ပိတ်စေတယ်ဆိုတာ တကယ်လား??? လင်ရယ် မယားရယ် ဖြစ်လာပြီဆို တစ်အိပ်ယာတည်း အတူအိပ် ကြရပါတယ်။မိန်းမသားတွေဟာ လင်ယောကျာ်း ရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ သာ အိပ်ခွင့်ရှိပါ တယ်……… ဒါပေမယ့် ဘာဖြစ်လို့ မိန်းမသားတွေဟာ လင်ယောကျာ်းရဲ့ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာပဲအိပ်ခွင့်ရှိတာလဲ………ဘာကြောင့်လဲ အမှန်ဆို အိပ်ချင်တဲ့ ဘက်အိပ်မှာပေါ့နော်…တချို့ဆို အိပ်ယာဘေးဘက် နံရံ ထောင့်ဘက် အခြမ်းကို မိန်းမသားတွေ ပိုမိုကြိုက်နှစ် သက်လေ့ရှိပါတယ်… ဘေးမှာက နံရံ အတားအဆီး တစ်ခု ဖြစ်သလို ဒီဘက် ဘေးမှကြ အားကိုးအားထားပြုရတဲ့ လင်ယောကျာ်း အဲတော့ မှ သူတို့က မိမိကိုယ်ကို လုံခြုံမှု အပြည့်နဲ့ စိတ်ချလက်ချ အိပ်စက်နိုင်ကြတာပါ……… … Read more
one champianshipမှ ချန်ပီ ယံ အသစ် REINIER ကို စိန်ခေါ် နိုင်ခွင့် အား အောင်လ အပါ ဝင် အခြား သူများ ကိုပါ ပေးထား….
one champianshipမှ ချန်ပီ ယံ အသစ် REINIER ကို စိန်ခေါ် နိုင်ခွင့် အား အောင်လ အပါ ဝင် အခြား သူများ ကိုပါ ပေးထား Champion အ သစ် Reinier ကို တော့ စိန် ခေါ် နိုင် ခွင့် ပေး ထား ပါပြီ ။ ကျွန်တော် တို့တွေ ရဲ့ မြန် မာ့ ဂုဏ် ဆောင် Aung La N Sang က တော့ ထိပ် ဆုံးက နေပြီး တော့ ကို ပါ ဝင် လာ ခဲ့ ပါ တယ် … Read more
ရာသီ လာချိန်မှာ ဘယ်လိုအစားအစာတွေကိုရှောင်ပြီး၊ ဘာတွေကိုတော့ စားပေးနိုင်သလဲ?
အမျိုးသမီးများရဲ့ အာဟာရလိုအပ်ချက်တွေဟာ ရာသီလာချိန်တစ်လျှောက်လုံး ပြောင်းလဲနေပြီးတော့ ဒါဟာ ဟော်မုန်းအတက်အကျဖြစ်ခြင်း အကြောင်းအရင်းတစ်ခုတည်းကြောင့်တော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါ့အပြင် သွေးဆင်းချိန်မှာ ပဓာနကျတဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေနဲ့ ဗီတာမင်တွေကိုလည်း ဆုံးရှုံးသွားနိုင်ပါတယ်။ အခုလိုဆုံးရှုံးမှုကို ပြန်လည်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များက အမျိုးသမီးများရဲ့ ရာသီချိန်မှာ အာဟာရမျှတစွာ စားသုံးပေးဖို့ကို အမြဲတိုက်တွန်းနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ရာသီလာချိန်မှာ ကြုံတွေ့ရလေ့ရှိတဲ့ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ ရောင်ခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ မူးဝေခြင်းနှင့် မအီမသာဖြစ်ခြင်းတို့ကို တိုက်ထုတ်ဖို့အတွက် တစ်ချို့သောအစားအစာများက သင့်ကို ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် အမျိုးသမီးတွေအတွက် အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ ရာသီချိန်မှာ ဘယ်လိုအစားအစာတွေကို စားသင့်ပြီး၊ ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေကို ရှောင်ကြဉ်ရမလဲဆိုတာကို အခုပဲပြောပြပေးချင်ပါတယ် ရာသီချိန်မှာ စားပေးသင့်တဲ့ အစားအစာများ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း ဓမ္မတာချိန်မှာ ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးသတ္တုဓာတ်ကတော့ သံဓာတ်ဖြစ်တာကြောင့် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့ပမာဏကို ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့အတွက် ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းက ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။ သံဓာတ်အပြင်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ … Read more
5.11.2020 မှ 11.11.2020အထိ တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီးဟောစာတမ်း
5.11.2020 မှ 11.11.2020အထိ တဈပတျစာ ၇ရကျသားသမီးဟောစာတမျး တနင်ျဂနှေ ယခုကာလမြားအတှငျ မိနျးမနှငျ့ ပတျသကျသော အရှုတျအထှေးမြား ရငျဆိုငျရတတျပါသညျ။ မကျြနှာမှာ လညျး မတျောတဆ ထိခိုကျဒဏျရာမြား ရတတျပါသညျ။ လုပျငနျးအကွံအစညျသဈမြား ပျေါပေါကျ လုပျကိုငျရ တတျသညျ။ သငျအလှနျအမငျး အဆငျပွနေပွေီဟု ဆှမြေိုးအပေါငျးအသငျးတို့အားလုံး၏ အထငျကွီး လေးစားမှုကို ခံရမညျ။ သူခိုး၊ သူဝှကျ မကျြစိကနြသေော အခြိနျကာလဖွဈပါသညျ။ သှပျ၊ သံ၊ သဈ၊အိမျဆောကျပစ်စညျး လုပျငနျး မြား လုပျကိုငျသူမြား အထူးအကြိုးပေးသော အခြိနျကာလဖွဈပါသညျ သငျ့လကျတဈကမျးသို့ ရောကျရှိ နသေော ကံကွမ်မာ အခှငျ့အလမျးကောငျးမြားကို အမိအရဆုပျကိုငျ၍ လုပျဆောငျပါ။ မိတျကောငျး ၊ ဆှကေောငျးတဈယောကျ နှငျ့ ဆုံတှရေ့မညျ။ ပညာရပျတဈခုခု ကိုလညျး သငျရတတျမညျ။ သို့သျော နားလညျတကျမွောကျဖို့ခကျနလေိမျ့မညျ။ … Read more
ယောင်္ကျား နှင့် မိန်းမ တို့၏ ချစ်ရေးချစ်ရာ နှင့် အိမ်ထောင်ရေး အကြောင်း တစေ့တစောင်း…..
လောကကြီး၏ လိုအပ်မှုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် ယောက်ျား ကို ဖန်ဆင်းသည်။ ယောက်ျား၏ လိုအပ်မှုကြောင့် ဘုရားသခင်သည် မိန်းမကို ဖန်ဆင်းသည်။ ယောက်ျားလေးက မိန်းကလေးကို ချစ်မိလျှင် ကဗျာများရေးဖွဲ့ တတ်၏။ မိန်းကလေးက ယောက်ျားလေးကို ချစ်မိလျှင် စိတ်ကူးယဉ် အိပ်မက်မက်တတ်၏။ မိန်းကလေး၏ အကောင်းဆုံး ကိုယ်ပိုင် အရည်အချင်းမှာ ချွဲနွဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယောက်ျားလေး၏ အရည်အချင်းမှာ လိမ်ညာခြင်း ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးအတွက် ကံကောင်းခြင်းမှာ “သူ ငါ့ကို တကယ်ချစ်ရှာသည်”ဟု ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပြီး ယောက်ျားလေးအတွက် ကံကောင်းခြင်းမှာ “သူ့ကို ချစ်ရတာ ထိုက်တန်သည်” ဟု ထင်မြင်ခြင်း ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးတွင် ပြေပြစ်သော ရုပ်ရည်ရှိသင့်ပြီး ယောက်ျားလေးတွင် ပြည့်စုံသော ဓနဥစ္စာရှိသင့်သည်။ မိန်းကလေးက ယောက်ျားလေးကို နမ်းခြင်းသည် စိတ်ကြည်နူးမှုဖြစ်ပြီး ယောက်ျားလေးက … Read more
မိန်းကလေးတွေ လုံးဝ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ ချစ်သူကောင်လေးတွေရဲ့ လုပ်ရပ် (၄) မျိုး …
မိန်းကလေးတွေ လုံးဝ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ သူတို့ ချစ်သူတွေရဲ့ လုပ်ရပ် (၄) မျိုး … အချစ်ကြီးတဲ့နေရာမှာ မိန်းကလေးတွေက နာမည်ကျော်ကြပါတယ်။ ဒီလို အချစ်ကြီးပေမယ့်လည်း မိန်းကလေးတွေမှာ ချစ်သူကို ဘယ်လိုမှ ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့အရာတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အရာအားလုံးကို ခွင့်လွှတ်နိုင်ရင်တောင် လုံးဝ ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ မရတဲ့ အရာတွေကတော့ (၁) သစ္စာဖောက်တာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အမုန်းဆုံးအချက်ကတော့ သစ္စာဖောက်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ လူသိရှင်ကြားတွဲနေလျက်နဲ့ ကိုယ့်အပေါ် သစ္စာဖောက်သွားတာကို အမုန်းဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်အလိုလိုက်ပြီး ဖြစ်သွားတာ ဖြစ်စေ၊ ခေတ္တဖြစ်ပြီး ပြီးသွားတာ ဖြစ်စေ မိန်းကလေးတွေက အရမ်းမုန်းပါတယ်။ (၂) အပြိုင်ထားတာ အချစ်ဆိုတာ ကိုယ့်အပေါ်ပဲ အာရုံစိုက်ပြီး ဂရုတစိုက်ချစ်ကြခြင်းလို့ မိန်းကလေးတွေက နားလည်ထားကြပါတယ်။ ဒါကို နောက်တစ်ယောက်ပါ … Read more
မိန်းကလေးတိုင်း သတိပြုသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါများရဲ့အစပျိုးလက္ခဏာများ…
မိန်းကလေးတိုင်း သတိပြုသင့်တဲ့ အမျိုးသမီးရောဂါများရဲ့အစပျိုးလက္ခဏာများ… အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံက အမျိုးသားတွေနဲ့ လုံးဝကို ခြားနားနေပြီး အမျိုးသမီးတွေမှာသာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ရောဂါတစ်ချို့ကြောင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပိုဂရုစိုက်ဖို့ အထူးလိုအပ်ပါတယ် …။ အသက်အန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်နိုင်တဲ့ ရောဂါတွေဟာ တစ်ရက်နှစ်ရက်အတွင်း ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ဘဲ ရက်ရှည်လများ အစပျိုးပြီး ဖြစ်လာတာမျိုးပါ …။ ရောဂါအစပြုနေချိန်မှာ သတိထားမိခဲ့ရင် အသက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင် အချိန်မီတားဆီးနိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးတိုင်းသတိပြုသင့်တဲ့ ရောဂါအစပျိုးလက္ခဏာတွေကို ပြောပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) ဗိုက်ပူနေခြင်း” မိန်းကလေးတွေဟာ အသက်ရလာတာနဲ့အမျှ လေ့ကျင့်ခန်းတွေ သေချာမလုပ်ဘူးဆိုရင် ဗိုက်ပူလာတတ်ပါတယ် …။ ဗိုက်မှာအဆီစုပြီး ဗိုက်ပူတာက ပုံမှန်ပဲဖြစ်ပေမယ့် အစားအများကြီး စားထားသလိုမျိုး ဗိုက်ဖောင်းပြီး ပူနေတယ်ဆိုရင်တော့ စိုးရိမ်ရပါတယ် …။ ဝမ်းဗိုက်က အမြဲလိုလိုတင်းပြီး … Read more
ဆံပင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သင်ရပ်တန့်ပစ်သင့်တဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းအတွေးအခေါ်များ
ကလေးဘဝကတည်းက ဆံပင် နဲ့ပတ်သက်ပြီး နာယူစရာ၊မှတ်သားစရာ နည်းလမ်းအဖုံဖုံကိုကြားသိပြီး အဆင့်ဆင့်လက်ဆင့်ကမ်းသယ်ဆောင်လာခဲ့ကြတာ ယနေ့ချိန်ထိပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် ခေတ်မီလာတာနဲ့အညီ တချို့နည်းတွေရဲ့စနစ်မကျမှုတွေကိုမြင်လာတဲ့အပြင် တစ်စုံတရာရှင်းချက်ထုတ်မပေးနိုင်၊သက်သေမပြနိုင်တဲ့နည်းအများစုဖြစ်နေတတ် တာကိုသတိထားမိပါတယ်။ဒီတစ်ခါမှာတော့ ဆံပင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူသိများနေတဲ့ လက်ဆင့်ကမ်းအတွေးအခေါ်အချို့ကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1.ဆံပင်ညှပ်လေလေ သန်လေလေ ဆံပင်ကအရင်းကနေပေါက်တာဖြစ်ပြီး အဖျားကနေပေါက်တာမဟုတ်လို့ ဆံပင်သန်နှုန်းဟာ ညှပ်တာနဲ့လုံးဝမဆိုင်ပါဘူး။ နောက် အများစုလက်ခံထားကြတဲ့ ဂတုံးရိတ်ခြင်းနဲ့ဆံပင်သန်ခြင်းလည်း လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ ဆံပင်ရဲ့မွှေးညှင်းပေါက်အရေအတွက်ဟာ မျိုးရိုးဗီဇအလိုက် သတ်မှတ်ပြီးလာတာမို့ပါ။ 2.သဘာဝအခြောက်ခံခြင်းဟာ လေမှုတ်စက်ထက်ပိုကောင်းတယ် ခေတ်ကတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ နည်းပညာတွေတိုးတက်လာတဲ့အခါမျိုးမှာ ယှဉ်ပြိုင်အကဲဖြတ်တာတွေပေါ်လာတတ်တာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါ။တကယ်လို့သင့်ဆံပင်က ခပ်တိုတိုဆိုရင်တော့ သဘာဝအခြောက်ခံလိုက်တာ မြန်လည်းမြန်၊ကောင်းလည်းကောင်းမှာပေါ့။ဒါပေမယ့် ရှည်လျားတဲ့ဆံပင်တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ အပူချိန်ခပ်လျော့လျော့လေးပေးထားတဲ့ လေမှုတ်စက်က အသင့်တော်ဆုံးပါ။ 3.ဦးရေခြောက်သွေ့ခြင်းဟာ ဗောက်ထခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်း ဒီအချက်ကတော့ လုံးဝဆန့်ကျင်ဘက်ပါ။တကယ်တော့ ဗောက်ဟာ အဆီများတဲ့ဦးရေပြားပိုင်ရှင်တွေမှာပဲတွေ့နိုင်တာမို့ ဒီလိုမကြာခဏဗောက်ထတာကိုဖြေရှင်းချင်တယ်ဆိုရင် သင့်ကိုအခြေအနေဆိုးဝါးစေတဲ့ ဆီတွေမလိမ်းပါနဲ့။ 4.ဆံဖျားပျက်စီးခြင်းကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းနိုင်တယ်။ ဆံဖျားပျက်စီးခြင်း၊ဆံသားကွဲထွက်ခြင်းတွေကို အထူးနည်းလမ်းတွေ၊ဆီတွေနဲ့ … Read more